Buug uu qoray Qoraa sare oo wax badan ka qoray | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Buug uu qoray Qoraa sare oo wax badan ka qoray
Qoraaga magaciisu yahay Kent Keith oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa Sannadkii 1986-kii wuxuu buug uu qoray ku uruuriyay toban nasteexo kaas uu u bixiyey WAX KASTA OO DHACA.
Buugan wuxuu muddo dheer ahaa kutubta ugu beeca ama ugu iibsiga badan, waxaana loo tarjamay afaf badan. talooyinkiisa waxay noqdeen halqabsiyaal darbiyada iyo albaabada lagu dhajiyo waxaana uu ku bilaabay sidan:
1- Dadka fikirkoodu kuma dhisna caqli, dantooda kaliya ayaa u muuqata, iska jeclow dadka wax kasta oo dhaca!
2- wax wanaagsan hadii aad qabato dadku waxay kugu tuhmaayaan in ay dan gaar ah kuugu Qarsoontahay, Khayrka samee wax kasta oo dhaca.
3- Haddaad guul xaqiijisid waxaad yeelanaysaa saaxiibbo been ah iyo cadow run ah. Dariiqa guusha ku taagnow Wax kasta oo dhaca.
4- khayrka aad qabanaysid maanta barri waa la halmaami.
Khayrka samee wax kasta oo dhaca!
5- Runta iyo warkaaga waxay kuu abuuri doonaan mucaarado.
Noqo runlow warkiisu cadyahay wax kasta oo dhaca.!
6- Raga iyo dumarka miisaanka culus xanbaarsanna fikradaha waawayn waxaa dhicikarta in afkaartoodu ka socon waydo Rag iyo dumar aan lahayn fikrado qodan iyo qiima badan, Ku dhaganow oo xambaarsanow fikradaha waawayn wax kasta oo dhaca.
7- dadku waxay jecelyihiin oo caadifadoodu la jirtaa kuwa la rarto oo madluumiinta. Waxayse dabagalaan oo ay u hogaansamaan kuwa kibra oo dulmiga ku caanbaxay. U kifaax inta tabartadaran Wax kasta oo dhaca.
8- waxaad dhisaysay sannado badan waxay ku dumi karaan ilbiriqsi.
Ha ka daalin in aad wax dhistid intaad nooshahay wax kasta oo dhaca.
9- Baahida aadmigu waa joogto aan dhammaanin; markaad kaalmaysid waxaa suurtowda in aay ku caayaan kula diriraan. Kaalmadaada ha daa’imto wax kasta oo dhaca!
10- haddaad dadka adduunyada ku nool aad siiso waxa ugu sarreeya eed kari karto, adoon waxba hakranin waxaa suuro gal ah in qaarkood ku xumeeyaan.
Waxa ugu fiican sii dadka jooga dunida wax kasta oo dhaca.
Xigasho Dr Ali
Previous articleFahad Yasiin oo la kulmay Cali Guudlaawe kuna cadaadinaayo
Next articleDenbi Qaran ayety noqon
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in dalkiisa "uu ka aargudan doono" weerrar lagu soo qaaday xarun dhulka hoostiisa ku taal oo nukliyeerka...
Xiisad dagaal oo ka taagan xerada Ciidamada Iskool Boliisiya ee magaalada...